ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် Website ၏ Mobile Application အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း နေပြည်တော်၊ မေ ၂၉
Language ENG / မြန်မာ
Religion, Art & Culture
Job & Vacancy
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် Website ကို Mobile ဖုန်းဖြင့် အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ရန် Mobile Application Version-2 အား Google Play Store ၌ Pyidaungsu Hluttaw အမည်ဖြင့် Upload ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Android ဖုန်းများအတွက် Mobile Application အား Google Play Store တွင် Download ပြုလုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ Website တွင်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်များအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန သတင်း၊ တိုင်ကြားစာနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန၏ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မေလအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ
Publication Date : 15-06-2020
Language : မြန်မာ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
Publication Date : 26-03-2020
Language : myanmar
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Publication Date : 21-06-2018
INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 19
Agency : Pyidaungsu Hluttaw Closing Date : 2020-07-03
Invitation For Quotations (Extension of Date) Nay Pyi Taw, June 16 Attention: Among these packages, the quotation for Network and Security Ref No: MPFMp-JPAC-D1-GS 715 will be submitted at or before 3pm of June 22, 2020. Late bids will be rejected.
Agency : Pyidaungsu Hluttaw Closing Date : 2020-06-22
INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 1
Agency : Pyidaungsu Hluttaw Closing Date : 2020-06-15
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Agency : Ministry of Foreign Affairs Closing Date: : 2020-04-01
အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာ နှုန်း၊ ၂၁၆ဝဝဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ) ရာထူး (၁၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Agency : Ministry of Labour, Immigration & Population Closing Date: : 2018-12-28
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ပေးအပ်သည့် အကူအညီပေးရေး ဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ (၃) ခု လက်မှတ်ရေးထိုး
&nbspPolls & Survey
© 2019 Government of Republic of the Union of Myanmar.